တိုက်ခန်းဝယ်ရမလားနှင့် KP ပညာ (တိုကျခနျးဝယျရမလားနှငျ့ KP ပညာ) – အခါပေး ဗေဒင်
တိုက်ခန်းဝယ်ရမလားနှင့် KP ပညာ (တိုကျခနျးဝယျရမလားနှငျ့ KP ပညာ)
akhapaybaydin7Dec 2018 31 Dec 2019 Uncategorized
ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းတွေ အဝယ်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ မိတ်ဆွေတစ်ဦး သူစဉ်းစားထားတဲ့ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို ဝယ်သင့် မဝယ်သင့် မေးလာလို့ တွက်ကြည့်ထားတာပါ။
ကနျထရိုကျတိုကျခနျးတှေ အဝယျလိုကျနတေဲ့အခြိနျမှာ မိတျဆှတေဈဦး သူစဉျးစားထားတဲ့ တိုကျခနျးတဈခနျးကို ဝယျသငျ့ မဝယျသငျ့ မေးလာလို့ တှကျကွညျ့ထားတာပါ။
Date: 05-10-2014 (Sun)
Given No. 17.
Place: Hadong, Korea. 127d 49m 24s (East)/ 34d 56m 31s (North)
Query: ရည်ရွယ်ထားတဲ့တိုက်ခန်း ဝယ်သင့်သလား?
အထက်ပါ Astro Data များကို KP ဟူးရားဇာတာဖွဲ့လျှင် အောက်ပါဇာတာကို ရရှိပါမည်-
(အထကျပါ Astro Data မြားကို KP ဟူးရားဇာတာဖှဲ့လြှငျ အောကျပါဇာတာကို ရရှိပါမညျ-)
အိမ်၊ တိုက်ခန်းတို့ကို ဝယ်မယ်ဆိုယင် ၄-တန့် Cuspal Sub Lord (CSL) ကို သုံးသပ်ရပါမယ်။ ၄-တန့် CSL သည် ဝကြမသွားရ၊ ဝကြသွားသော ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကို မစီးရ။
အကယ်၍ ၄-တန့် CSL သည် ဝကြ(နောက်ပြန်)သွားခြင်း၊ ဝကြသွားသော ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်တို့ကို စီးနင်းခဲ့လျှင် ဝယ်ဖြစ်မည် မဟုတ်ပေ။
မဝယ်ဖြစ်ဟုဆိုခြင်းထက် ဆုတ်ယုတ်နေသောဂြိုဟ်ဖြစ်သောကြောင့် မဝယ်သင့်ဟုဆိုက ပိုမှန်ပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါ အိမ်၊ တိုက်ခန်းမျိုးကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် အကျိုးရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ဥပမာ- ဝယ်ပြီးမှ ဈေးထိုးကျသွားတာမျိုး၊ ကန်ထရိုက်ပြေးသွားတာမျိုး၊ ရောင်းမထွက်ခြင်းမျိုးများ ဖြစ်တတ်သည်။
အကယ်၍ ဝကြမသွားမှသာလျှင် မြတ်မှာလား၊ ရှုံးမှာလား၊ ခိုက်မှာလားစသည့် အခြားအချက်များကို ဆက်လက်ကြည့်သင့်ပေသည်။
အိမျ၊ တိုကျခနျးတို့ကို ဝယျမယျဆိုယငျ ၄-တနျ့ Cuspal Sub Lord (CSL) ကို သုံးသပျရပါမယျ။ ၄-တနျ့ CSL သညျ ဝကွမသှားရ၊ ဝကွသှားသော ဂွိုဟျပိုငျနက်ခတျကို မစီးရ။
အကယျ၍ ၄-တနျ့ CSL သညျ ဝကွ(နောကျပွနျ)သှားခွငျး၊ ဝကွသှားသော ဂွိုဟျပိုငျနက်ခတျတို့ကို စီးနငျးခဲ့လြှငျ ဝယျဖွဈမညျ မဟုတျပေ။
မဝယျဖွဈဟုဆိုခွငျးထကျ ဆုတျယုတျနသေောဂွိုဟျဖွဈသောကွောငျ့ မဝယျသငျ့ဟုဆိုက ပိုမှနျပလေိမျ့မညျ။ အဆိုပါ အိမျ၊ တိုကျခနျးမြိုးကို ဝယျယူခွငျးဖွငျ့ သငျ့အတှကျ အကြိုးရှိလိမျ့မညျ မဟုတျပေ။ ဥပမာ- ဝယျပွီးမှ ဈေးထိုးကသြှားတာမြိုး၊ ကနျထရိုကျပွေးသှားတာမြိုး၊ ရောငျးမထှကျခွငျးမြိုးမြား ဖွဈတတျသညျ။
အကယျ၍ ဝကွမသှားမှသာလြှငျ မွတျမှာလား၊ ရှုံးမှာလား၊ ခိုကျမှာလားစသညျ့ အခွားအခကျြမြားကို ဆကျလကျကွညျ့သငျ့ပသေညျ။
အထက်ပါဇာတာတွင် ၄-တန့် CSL သည် ၄-ဟူးဖြစ်၍ ဝကြသွားနေ၏။ ထို့ကြောင့် မဝယ်ရန်အကြံပေးခဲ့၏။ လက်တွေ့တွင်လည်း ကန်ထရိုက်မှ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းလျှင် နှစ်ဦးသုံးဦးရောင်းခဲ့၍ ထိုတိုက်မှအခန်းဝယ်ယူ သူများ ပြဿနာတက်ကြလေရာ ကျွန်တော့်ရဲ့မိတ်ဆွေကတော့ ကံကောင်းစွာဖြင့် လွတ်သွားလေတော့၏။
နက္ခတ်ပညာရှင်သည်သာ မမြင်ရသည့် အနာဂတ်ကံကြမ္မာကို ကြိုတင်မြင်ရသောကြောင့် နားလည် တတ်ကျွမ်းသည့် နက္ခတ်ပညာရှင်များနှင့်သာ တိုင်ပင်၍ ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုတင်ပြ လိုက်ပါသည်။
အထကျပါဇာတာတှငျ ၄-တနျ့ CSL သညျ ၄-ဟူးဖွဈ၍ ဝကွသှားနေ၏။ ထို့ကွောငျ့ မဝယျရနျအကွံပေးခဲ့၏။ လကျတှတှေ့ငျလညျး ကနျထရိုကျမှ တိုကျခနျးတဈခနျးလြှငျ နှဈဦးသုံးဦးရောငျးခဲ့၍ ထိုတိုကျမှအခနျးဝယျယူ သူမြား ပွဿနာတကျကွလရော ကြှနျတေျာ့ရဲ့မိတျဆှကေတော့ ကံကောငျးစှာဖွငျ့ လှတျသှားလတေော့၏။
နက်ခတျပညာရှငျသညျသာ မမွငျရသညျ့ အနာဂတျကံကွမ်မာကို ကွိုတငျမွငျရသောကွောငျ့ နားလညျ တတျကြှမျးသညျ့ နက်ခတျပညာရှငျမြားနှငျ့သာ တိုငျပငျ၍ ရှေးခယျြဝယျယူသငျ့ပါကွောငျး အကွံပွုတငျပွ လိုကျပါသညျ။
Previous သမ္မတဦးထင်ကျော် ကျမ်းကျိန်မင်္ဂလာအခါဇာတာ
Next ကံကောင်းလာမည် မြန်မာပြည်- ၂၀၁၉ (ကံကောငျးလာမညျ မွနျမာပွညျ- ၂၀၁၉)
19 Dec 2018 at 10:15 pm